About Us - Jinan Ruijie Farsamada Qalabka Co., Ltd.
Standard Open Nooca Fiber Laser Jarida Machine
Culus oo Standard Open Nooca Fiber Laser Goynta Machine
Shirkadda Our caan ku tahay tayo sare leh oo si fiican u adeega-sale ka dib markii sida qiimaha tartan rasmi ah.
waxyaabaha Our hubkaas ayaa loo isticmaalaa in industry ee soo socda, sida alwaaxa, Advertising, Artmaking, Model, Electric, CAD / Cam Industry Model, Dharka, Xidhmada Daabacaadda, Calaamadaynta, Laser Daboolayo iyo wixii la mid ah.
Shirkadda Our ayaa ka taagay in ka badan 20 sale iyo adeega qaybaha agagaarka Shiinaha oo ku siin karaan macaamiisheena adeega of design, qamaar, tababarka, dayactirka iyo wixii la mid ah. Sida sale ee Shiinaha, our alaabta la dhoofiyo oo caalamka ah oo ay ku jirto Koonfur, Bariga Dhexe, Afrika, Yurub iyo USA
Our fikrad shirkadda maaraynta waxaa horumarinta wax soo saarka oo tayo sare leh oo loogu talagalay macaamiisha.
Waxaan raadinaya distributors ee adduunka oo dhan. Rajaynaynaa in aan iskaashi kartaa suuqa dunida.
Hel cusbooneysiin EMAIL
Advertising Fiber Laser Goynta Machine